EVY’s Kitchen | Food Magazine Myanmar | Page 5
Cream Horns Puff Pastry ကို အသုံးပြုထားတဲ့ မုန့်လုပ်နည်းတစ်ခုပါ။ ► ပါဝင်ပစ္စည်းများ ♦ Ready made puff pasty ♦ Whipping cream – ၁၅ဝ ဂရမ် ♦ Icing sugar – ....
ငါးပိထမင်းကြော် ယိုးဒယားထမင်းကြော်နည်းတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ ငါးပိထမင်းကြော်နည်းကို မှီငြမ်းထားပါတယ်။ အချိန်ကုန်သက်သာပြီး အရသာရှိတဲ့ ထမင်းတစ်ပွဲပါ။ ► ပါဝင်ပစ္စည်းများ (၁ ယောက်စာ) ♦ ထမင်း – တစ်ခွက် ♦ စိမ်းစားငါးပိ – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း (ရေနွေးနဲ့ ဖျော်ထားပါ) ♦ ....
ပုစွန်ငါးဆုပ်ဟင်း ပုစွန်ကို ရိုးရိုးမချက်ချင်တဲ့အခါမှာ ဒီလိုလည်းလုပ်စားနိုင်ပါတယ်။ ► ပါဝင်ပစ္စည်းများ (ပုစွန်ငါးဆုပ်အတွက်) ♦ ပုစွန် – ၂ဝဝ ဂရမ် ♦ ကြက်သွန်နီဥသေး – ၁ ဥ ♦ ကြက်သွန်ဖြူ – ၃ မြွှာ ♦ ဆား ....
Vanilla swiss roll Swiss Roll ကို အရောင်လေးတွေစပ်ပြီး စိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်ပြထားတာပါ။ အထဲက ခရင်မ်ကတော့ ပုံမှန် Whipping Cream ကိုပဲ သုံးထားပါတယ်။ ► ပါဝင်ပစ္စည်းများ ♦ ကြက်ဥ – ၃ လုံး ♦ သကြား ....
Lemon Poppy Seed Chiffon Cake ► ပါဝင်ပစ္စည်းများ အစု (၁) ♦ ဘိန်းစေ့ – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်း ♦ နေကြာဆီ – စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်းခွဲ ♦ ကြက်ဥအနှစ် – ၄ ခု ....
Floss Lyaer Cake
Floss Lyaer Cake ပုံမှန် ဆွစ်ရိုးမဟုတ်ဘဲ အလွှာအနေနဲ့ လုပ်ပြထားတာပါ။ Sour Cream နဲ့ မရောနိစ်ကို ခရင်မ်အဖြစ် သုံးပြထားပါတယ်။ အရသာက သိပ်မချိုဘဲ ချဉ်ဆိမ့်ဆိမ့်လေးပါ။ ► ပါဝင်ပစ္စည်းများ ♦ ကြက်ဥ – ၄ လုံး ♦ သကြား ....
ကြက်သောက်ဆမ်း ဒီဟင်းပွဲကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ မြန်မာပြည်ပြန်တုန်းက အိမ်မှာချက်တဲ့ ဟင်းတစ်ခွက်ပါ။ ပူပူစပ်စပ်နဲ့ သောက်လို့ကောင်းတာကြောင့် ချက်နည်းကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ► ပါဝင်ပစ္စည်းများ ♦ ကြက် – တစ်ခြမ်း (သေးသေးခုတ်ထားပါ) ♦ ဆင်ခရမ်းချဉ်သီး – ၁ဝ လုံး ♦ ကြက်သွန်နီ ....
ချောကလက်ချိစ်အလွှာကိတ် အရသာရှိတဲ့ ချောကလက်ချိစ်ကိတ်လုပ်နည်းကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ► ပါဝင်ပစ္စည်းများ ♦ Cream Cheese – 200g ♦ Sugar – 50g ♦ 1 Egg အဲဒါတွေအားလုံးကို သမအောင်ရောမွှေထားလိုက်ပါ။ ချောကလက်မုန့်နှစ်အတွက် ♦ ထောပတ် – ....
Cranberry Cookies လွယ်ကူမြန်ဆန်ပြီး အရသာရှိတဲ့ ကွတ်ကီးတစ်မျိုးပါ။ Cranberry အသီးခြောက်များကို ထည့်သွင်းပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ► ပါဝင်ပစ္စည်းများ ♦ ထောပတ် – ၁၆ဝ ဂရမ် ♦ ပေါင်ဒါသကြား – ၅ဝ ဂရမ် ♦ ဂျုံ – ၂၄ဝ ....